ရင်ထဲကနှစ်သစ်သင်္ကြန် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
April 14, 2007, 3:27 am
ကျမနှုတ်မှ အံ့သြစွာရေရွတ်မိပြီး သေသေချာချာပြန်ကြည့်မိတော့ တပင်လုံးမှာ ၀ါထိန်ဝင်းဝါနေတဲ့ ပိတောက်ပွင့်များ … ။ ပိတောက်ပင်အောက်မှာ ရပ်ရင်း လေနှင်ရာအလိုက်ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ ပိတောက်ခက်တွေကို ကျမ ကြည်နူးစွာကြည့်နေမိသည် … ။ သင်းပျံ့သောရနံ့တို့နှင့် မြေပြင်ပေါ်မှာ ပိတောက်ပွင့်လေးတွေ ကျဲပြန့်စွာ ကျနေပုံက နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ပန်းခင်းလမ်းပန်းချီကား တစ်ချပ်ကို တသသခံစားနေရသလို ရင်ထဲမှာ လှိုက်ဖိုမိသည် … ။
ရိပ်သာလမ်းထိပ်မှာ ပိတောက်ပင်တွေ စည်ကားစွာ ပွင့်ဝေနေတာကို ကျမကြည့်ရင်း တိုက်ခတ်လာသော လေပြေအောက်မှာ တကယ်ကိုသာယာမိသည် .. ။ ရုတ်တရက် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ဆူညံသံများကို ကြားရပြီး ကျမလှည့်ကြည့်မိတော့ ကျမငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ရေပုံးတွေ ကိုယ်စီနှင့် ကျမကို ရေလောင်းဖို့ပြေးလာနေတာကို တွေ့လိုက်ရချိန်မှာ ကျမမျက်လုံးပြူးသွားသည်။
သင်္ကြန်မို့ရေစိုတာ ကျမ နားလည်သလို သင်္ကြန်ရေကို ကျမသိပ်ချစ်ပါသည် .. ။ သူတို့ရေလောင်းမှာကို ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပေမယ့် လူအများရဲ့ ရေတွေအောက်မှာ ကျမမွန်းကြပ်လာပြီး ခေါင်းကိုတွင်တွင်ခါလိုက်ပြီး “ရပ်တော့ ရပ်တော့”ဟု အော်လိုက်ချိန်မှာ ကျမ လန့်နိုးသွားရသည်။
ကျမ အိပ်မက်မက်နေတာပါလား … ။ ကျမတခန်းလုံးကို ဝေ့၀ဲကြည့်လိုက်ပြီး ရေတစ်ခွက်ထသောက်လိုက်ရသည် .. ။ ပြတင်းတံခါးနားရပ်ပြီး အပြင်ဘက်ကို ကျမကြည့်လိုက်တော့ မီးရောင်များနှင့် ထိန်လင်းအသက်ဝင်ငြိမ်သက်နေသော ခြင်္သေ့ကျွန်းအလှ … ။
ပြတင်းပေါက်နားမှာ တော်တော်ကြာရပ်ရင်း ဒီလိုအိပ်မက်တွေနှင့် လွမ်းဆွတ်နေရတဲ့ ကျမအပါအ၀င် ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေဘ၀ကို တွေးမိသည် … ။ ပိတောက်ရနံ့တွေ သင်းနေတဲ့ သင်္ကြန်ကို ကျမ အရမ်းလွမ်းဆွတ်မိကြောင်း ပြောလွန်းလို့ ကျမချစ်သူပင် နားအတော်ပူနေပါပြီ .. ။
ငရုပ်သီးတွေထည့်ထားတဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်ကို စားခဲ့မိရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စနောက်ခဲ့ပုံတွေ ၊ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဖျော်ဖြေနေတဲ့ သင်္ကြန်အကများ ၊ ကျက်သရေအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံစွာ ဥပုသ်သီလယူနေသူများ ….. ဒီပုံရိပ်တွေကို ကျမ သိပ်လွမ်းပါသည် … ။
နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာတော့ ကားတစ်စီးလာရင် ငှက်ပျောတုံးတွေ ချထားရင်း ရေအ၀လောင်းခဲ့တာတွေ ၊ ဖြတ်သွားသူများကို ယဉ်ကျေးစွာလောင်းခဲ့တာတွေကို ကျမ သတိရမိပါသည် … ။
သင်္ကြန်ဆိုသော ဝေါဟာရမှာ နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်အကြေးများကိုစွန့်ပစ်ပြီး နှစ်သစ်ကို စိတ်သစ် ၊ လူသစ် ရွှင်လန်းစွာဖြင့် ကြိုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည် … ။ ကုသိုလ်လည်းယူ ၊ ယဉ်ကျေးပျော်ရွှင်စွာ ကစားကြရင်း မြန်မာတို့ကြိုဆိုသော နှစ်သစ်သင်္ကြန်မှာ ရက်ထူးရက်မြတ်လလည်း ဖြစ်သည် .. ။
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ သင်္ကြန်ပွဲတော်လေး ဆင်းသက်လာပုံက ပုဂံခေတ်ကဖြစ်သည် .. ။ ခေတ်အဆက်ဆက် ဆင်းသက်လာသော သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ယနေ့ထိ မြန်မာလူမျိုးများက နှစ်သက်စွာ ဆင်နွှဲနေဖြစ်သည် .. ။ ပြည်နယ်အလိုက် ၊ တိုင်းအလိုက် ကျင်းပပုံကြခြင်း မတူညီကြသော်လည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများအားလုံးက ကြည်နူးကြစမြဲ .. ။
တူညီဝတ်စုံများ ၊ ပိတောက်ပန်းခက်များ ဝေဆာအောင်ပန်ထားသော လှပျိုဖြူများက စည်းချက်ညီညီ ယိမ်းနွဲ့ကနေပုံများကလည်း သင်္ကြန်ပုံရိပ်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည် … ။ ယခင်အချိန်များက သင်္ကြန်ပွဲတော်သည် ယဉ်ကျေးသည် .. ။ ငွေဖလားတွင် သပြေခက် ၊ နံ့သာရနံ့များဖြင့် ပက်ဖျန်းကြသည် .. ။ နောက်ပိုင်း သင်္ကြန်ယဉ်ကျေးမှုမှာ ခေတ်က ပျက်လာသည် … ။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆက်ဆံလာကြသည် … ။ ယဉ်ကျေးမှုကို မေ့လျော့လာကြသည် ။ နှမချင်း မစာမနာ ပြောသူများကို တွေ့ရချိန်မှာ လွန်စွာစိတ်ပျက်မိသည် …. ။
မီးသတ်ပိုက်များဖြင့် မိန်းကလေးများ ခါးကိုရွေးထိုးပက်ကြသူများကို စိတ်ပျက်မိသည် .. ။ နာစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်ဖြစ်လာသည် မဟုတ် .. ။ ဒါကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လည်း လိုအပ်သည် … ။
ခေတ်ဆိုသည်မှာ တသွင်သွင်စီးဆင်းနေသော စမ်းချောင်းနှင့်တူသည် … ။ ခေတ်အလိုက် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများကို လင်းကိုယ်တိုင်လည်း လက်ခံသလို နှစ်သက်သည် .. ။ ဒါပေမယ့် အရှက်အကြောက်ရှိဖို့အတွက်လည်း မမေ့သင့်ပေ … ။ မိမိနှစ်သက်သော ဒီဇိုင်းသစ်များ ၊ ခပ်ဆန်းဆန်းပုံစံများ ၊ လက်ပြတ် ၊ အဟိုက် ၊ စကပ်တိုတို … အစရှိသည်များကို အခြားအချိန်တွင် ကြိုက်သလို ၀တ်စားနိုင်သည် … ။ အားလုံးယဉ်ကျေးစွာ ကစားကြရမည့် နှစ်သစ်သင်္ကြန်အချိန်ခါတွင်တော့ ကိုယ်လုံးကောက်ကြောင်းကို ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်မည့် အ၀တ်ပါးများ ၊ စကပ်တိုတိုများကို မ၀တ်ဆင်သင့်ပေ .. ။ ဘီယာသောက်သော မိန်းကလေးများကို မြင်ရချိန်မှာ ကျမ ရင်နာမိသည် … ။ မြန်မာမိန်းကလေးများဟုတ်ပါလေစဟု ရင်ထဲမှာ တွေးမိသည် … ။
မြို့ကြီးများတွင်ရှိသူများက သင်္ကြန်ရောက်လျင် ကားဖြင့်လည်ပတ်ကြသည် … ။ ရေစိုလည်းခံ ၊ မိမိအတွက်လည်း လုံခြုံသော တီရှပ်များ ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်များ ၊ လက်ရှည်အကျီများကိုသာ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ဆင်ပြီး ရေပက်ခံထွက်ကြလျင် မြင်ရသူလည်းကောင်း ၊ မိမိအတွက်လည်း အိနြေ္ဒမပျက်ပေ .. ။ အချိန်နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး မြန်မာမိန်းကလေးများ နေတတ်ပါစေဟု ကျမ ဆန္ဒပြုမိသည် … ။
တချိန်က သင်္ကြန်ပွဲတော်ဟု ဆိုလိုက်တာနှင့် အားလုံးက အပြိုင်အဆိုင် ကျင်းပကြရင်း စည်ကားသိုက်မြိုက်လှသည် .. ။ ကျမ ၉တန်း ၊ ၁၀တန်းအချိန်က သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ၁၀ရက် ရေဖြတ်သည် .. ။ ကျမတို့နေသော ရပ်ကွက်က တိုက်ခန်းများသာရှိသော နေရပ်ဖြစ်သည်. ။ ဂျိုးဖြူရေကိုဖြတ်လိုက်တော့ ဘယ်လိုလုပ် နေထိုင်သောက်သုံးကြတော့မလည်းဆိုတာ ဘဘဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ဘက်က ကိုယ်ချင်းစာသင့်ပါတယ် .. ။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ မြန်မာတို့ ရိုးရာပွဲတော်တွေကိုလည်း စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ မဆင်နွှဲနိုင်ကြ ။ အလှူအတန်းတွေလည်း ကျဲပါးပြီး ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်း ပျက်စီးယိုယွင်းလာသည်။ ခေတ်အလိုက်ကြိုးစားနေထိုင်ကြရင်း မိမိရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစစ်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်ပါသည် .. ။ “ရှေ့ဆောင်နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားမှ နောက်ကနွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်မည်”ဟု လူကြီးသူမတွေ ဆိုကြတဲ့အတိုင်း ခေါင်းဆောင်က အရှေ့က မဟုတ်တာတွေချည်း လုပ်ပြနေရင် အနောက်ကလိုက်တဲ့သူအားလုံး မည်မျှမှန်ကန်ပါစေ ၊ စိတ်ဓါတ်များ ယိုယွင်းပျက်စီးလာမည်သာ … ။
အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုကြောင့် အကျပ်အတည်းများ ပြည့်နှက်နေသော မြန်မာများမှာ နှစ်သစ်ရောက်လျင် ယခင်အချိန်ကလို လွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိနိုင်ကြ .. ။ ရိုင်းစိုင်းစွာပြောဆိုကြ ၊ အမူးလွန်ပြီး ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသော လူငယ်တစ်ချို့ကြောင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို အချို့မှာလည်း ကြောက်ရွံ့စွာ လည်ချင်တိုင်း မလည်ရ အခြေအနေများ ဖြစ်လာသည် … ။
နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့က အားလုံးအတွက် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သလို ကုသိုလ်ယူရမည့် အချိန်တစ်ခု … ။ ထိုနေ့မှာ လူကြီးသူမများကို ခေါင်းလျှော်ပေးခြင်း ၊ ခြေသည်းလက်သည်းညှပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရပ်ကွက်ထဲမှ လူငယ်များက ကုသိုလ်ယူကြသည် … ။ လွန်စွာယဉ်ကျေးသော မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပါသည် .. ။ ညခင်းအချိန်အခါမှာလည်း စေတီများအောက်ခြေမှာ အတာအိုးငယ်လေးများ ၊ နံ့သာတိုင်များ ၊ ဆီမီးများဖြင့် ကျက်သရေအပေါင်းပြည့်စုံပြီး သပ္ပါယ်လှသည် .. ။ ထိုအလှတရားများဖြင့် ပြည့်စုံနေသော မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြင့်သာ ထိုက်တန်လှသည် .. ။
ပိတောက်ရနံ့တို့ဖြင့် သင်းပျံ့နေသော နှစ်ဦးအချိန်အခါမှာ မြန်မာလူမျိုးများအားလုံး ပျော်ရွှင်ခြင်း သုခများစွာဖြင့် နှစ်သစ်မှ အညစ်အကြေးများကို စွန့်ပစ်ကာ အေးချမ်းကြည်နူးကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ် … ။ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှလည်း အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီး လွတ်လပ်အေးချမ်းသော နိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ တည်ရှိနေပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်..။
Happy Myanmar New Year, Nyi Ma Lay.
Comment by Anonymous April 14, 2007 @ 4:47 am
လင်းလက်ရေ.. အစ်မလည်း ခုခေတ် မြန်မာပြည် သင်္ကြန် မြန်မာမဆန်ဘဲ ကို့ရိုးကားရားတွေကြည့်ပြီး လင်းလက်ခံစားရသလို ရင်နာမိတယ် ။ လင်းလက်လို အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ လူငယ်တွေ အများကြီး လိုအပ်တယ် ။
Comment by ဂျစ်တူး - gyit_tu April 14, 2007 @ 9:36 am
Happy Myanmar New Year naw!
Comment by MELODY MAUNG April 19, 2007 @ 11:20 am